Atụmatụ Azụmaahịa 7 nke Na-akpali Ntụkwasị Obi na Mbak | Martech Zone
Usoro Azụmaahịa Ọdịnaya 7 Na-akpali Nkwado na Ikekọrịta
Wenezde, August 3, 2016 Alex Membrillo
Contentfọdụ ọdịnaya na-arụ ọrụ karịa ndị ọzọ, na-emeri ọtụtụ mbak na ọtụtụ ntụgharị. Contentfọdụ ọdịnaya na-eleta ma na-akọrọ ugboro ugboro, na-eweta ọtụtụ ndị ọhụrụ na akara gị. Na mkpokọta, ndị a bụ iberibe nke na-eme ka ndị mmadụ kwenye na akara gị nwere ihe bara uru ikwu na ozi ha ga-achọ ịkọ. Kedu otu ị ga-esi zụlite ọnụnọ n'ịntanetị nke gosipụtara ụkpụrụ ndị na-eme ka ndị ahịa nwee obi ike? Cheta ntuziaka ndị a mgbe ị na-echepụta usoro ịzụ ahịa ọdịnaya gị:
Gosipụta Ọkachamara Gị
Otu n'ime ụzọ kachasị mma iji merie ntụkwasị obi ndị ahịa nwere bụ igosipụta na, ọ bụrụ na ha ahọrọ gị, ha ga-anọ n'aka aka. Mepụta ọdịnaya na-egosi na ị maara ụlọ ọrụ gị nke ọma. Dee ederede banyere omume kacha mma. Kọwaa ihe mere otu usoro ji dị mma karịa usoro ọzọ. Mepụta ndepụta ederede na-egosipụta mmejọ nkịtị na otu esi zere ha. Sortsdị iberibe ndị a na-egosi atụmanya gị na ị maara ihe ị na-ekwu na ị ga-atụkwasị obi na ị ga-eme nke ọma maka ha.
Mepụta Ọdịnaya Na-aza Mkpa Ndị Na-agụ Akwụkwọ
Mgbe ndị mmadụ bidoro ileba anya na ọdịnaya dị na saịtị gị, ọ na-abụkarị n'ihi na ha nwere otu ajụjụ ha chọrọ ka a zaa ha. Mepụta ọdịnaya nwere ike ịza ajụjụ gbasara atụmanya gị ma nyere ha aka ikpebi otu esi edozi nsogbu ha. Dịka ọmụmaatụ, ọ ga-abụ na onye na-enwe nsogbu na igwe ikuku ya nwere ike ịgụ na ihe kpatara ya maka ikuku ikuku iji kwụsị ikuku dị jụụ tupu ya amalite ịnwa ịhọrọ ụlọ ọrụ HVAC ịbịa wee jeere usoro ya ozi. . Site na ịbụ onye ịza ajụjụ ya, ị gosipụtara nka gị na njikere ị nyere ya aka n'okwu ya.
O yikarịrị ka ndị mmadụ hà ga-atụkwasị obi n'ụdị na-aza azịza nye ajụjụ ndị a na-ajụkarị n'ụzọ kwụ ọtọ ma na-enye aka, na-emeghị ka akwụkwọ mpịakọta onye ọ bụla gafee ọtụtụ ọdịnaya iji chọta ntakịrị ihe ha chọrọ. Site n’inye ndị ahịa gị ihe ha bịara na saịtị gị ịchọta, ị nwere ike ime ka o yikarịrị ka, ọ bụrụ na ha chọrọ ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ, nke gị ga-abụ nke ha họọrọ.
Ekwula na ha agwala gị; Gosi Ha
Jide n'aka na ị nwere ike ịkwado azịza ọ bụla ị na-ekwu. Dị ka ihe atụ, asịla na ị ga-enwe asọmpi ndị kasị asọ mpi n'ógbè gị. Mepụta eserese ma ọ bụ infographic iji tụnyere ọnụego gị na ndị asọmpi gị. Kwado azịza nke afọ ojuju ndị ahịa dị elu na nkwuputa sitere na akaebe sitere n'aka ndị ahịa nwere obi ụtọ. Enwere ike ileghara nkwupụta efu na-enweghị ihe ọ bụla iji kwado ya ma ọ bụ, nke ka njọ, iji mee ka onye na-agụ ya nwee obi enyo. Ọ bụrụ na ị na-enwe ike ịkwado nkwupụta ọ bụla ị na-ekwu na ihe akaebe, ọ na-egosi na ị na-akwụwa aka ọtọ yana na ị tozuru oke ntụkwasị obi ha na azụmaahịa ha.
Gosi Ndị Na-agụ Akwụkwọ Gị na Are Na-ege Ntị
Online mgbasa ozi bụ na-elekọta mmadụ na ọdịdị. Anyị niile nwere igbe ncha anyị, ma ndị na-ege anyị ntị bụ otu puku ma ọ bụ otu obere ezinụlọ na ndị enyi. Mgbe ị na-ezisa na ntanetị, ị na-eme mkparịta ụka. Gosi atumatu gi na ndi ahia gi ige nti dika ikwuru okwu.
Nyochaa mmekọrịta gị na ntanetị maka ịkpọ aha gị. Gụọ ihe ndị ị kwuru na blọọgụ gị. Hụ ihe ndị mmadụ na-enwe obi ụtọ na, karịa nke ahụ, ihe ha na-abụghị. Mgbe okwesiri ime nke a, dozie nsogbu ndị ahịa na blọgụ gị ma ọ bụ na ntanetị gị. Mgbe ndị mmadụ hụrụ na akara na-anabata ya, ọ ga-adịrị ha mfe inwe ntụkwasị obi inyefe akara ahụ azụmaahịa ha.
Gosiputa Ngosiputa Social
Mgbe anyị hụrụ na ndị ọzọ, ma ha bụ ndị anyị maara nke ọma ma ọ bụ na anyị amaghị, nwere ezigbo ahụmịhe na akara, anyị nwere ike ịtụkwasị obi n'okwu ha karịa azịza nke akara ahụ n'onwe ya. Gbaa ndị ọrụ ume ịhapụ nyocha ma kwupụta ihe ndị a na ọdịnaya gị mgbe o kwesịrị ekwesị. Nkwupụta ndị a sitere n'aka ndị ahịa n'ezie nwere ike ime ka ndị ọzọ nwee ahụ iru ala na-adaba ma jiri akara gị na-azụ ahịa.
BuzzSumo nyochara Ihe kachasị mma nke 2015 na netwọk ndị gụnyere Twitter, Facebook, na LinkedIn. Na, ụfọdụ n'ime ndị kasị ewu ewu bụ ndị nwere ụfọdụ mmetụta uche. Ndị mmadụ mere ihe dị mma na post ndị metụtara akụkọ na-enye obi ụtọ na akụkọ ọma banyere ndị mmadụ. O yikarịrị ka ha ga-ekerịta akụkọ ndị na-ese okwu ma ọ bụ na-awụ akpata oyi n'ụzọ ụfọdụ.
Mgbe ị na-eke ọdịnaya maka azụmahịa gị, chee echiche otu ụzọ onyinye ga-esi mee ka ndị na-agụ akwụkwọ gị nwee mmetụta. Hà nwere ike ịmasị ma ọ bụ atọ ọchị? Hà ga-eme ka ndị mmadụ mara na akụkọ? Reactionsdị mmeghachi omume ndị a na-eme ka ọdịnaya ọdịnaya gị nwee mmetụta dị mkpa na nke onwe. Ndị a bụ ụdị akụkọ dị iche iche nwere ike ị nweta nkọwa na mbak.
Mee Ya Onwe
Akara gị ọ na-arụ ọrụ na ndị ahịa ọ bụla ma ọ bụ obere azụmaahịa? Enwere ndị ahịa ọ bụla na-ekwu na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị abaarala ha uru n'ụzọ kachasị mkpa? Have nwere ndị ahịa ndị pụrụ iche na aka ha? Tụlee ịmepụta vidiyo ma ọ bụ ọdịnaya blog banyere akụkọ ndị ahịa ahụ. Ilekwasị anya n’otu onye na-eme ka ndị mmadụ na-emekọrịta ihe. Ha agaghị ahụrịrị ngwaahịa gị na ndụ gị ma ọ bụrụ na ị nye ha ndepụta atụmatụ. Site n’igosi otu o siri nyere ma ọ bụ mee ka mmemme nke ụbọchị mmadụ kwa ụbọchị dịkwuo elu, ị nwere ike inyere ndị ahịa gị aka ihu etu ngwaahịa gị nwere ike isi baara ha uru.
Mgbe ịkekọrịta ọdịnaya gị, ị ga-enweta akara gị n'ihu ndị ahịa nwere ike ịbụ ndị na-ahụghị ya. Ma, ị ga-enweta ihe akaebe mmadụ nke na-abịa site na ndụmọdụ onwe onye. Otutu ndi mmadu n’eme ka ndi mmadu mara ihe n’ile ha anya. E kwuwerị, òkè ahụ bụ nkwado doro anya nke ihe ọdịnaya gị nwere. Site na ịmepụta ọdịnaya nke na-akpali mmasị na mmetụta mmụọ mgbe ị na-egosi na akara gị kwesịrị ka ha lebara anya na ntụkwasị obi ha, ị nwere ike ịbawanye mbak gị, wulite mmekọrịta siri ike ma hụ uru nke ọdịnaya na-agbanwe.
Tags: content Marketingmbak ọdịnayammetụta ucheọkachamaradịkwuo mmadụ mbakmụbaa ntụkwasị obikpalite ntụkwasị obiegeonyesharegosi hankwado mmadụgwa hatụkwasị obi
Alex Membrillo bụ CEO nke Ngwọta Weebụ Cardinal, onyinye mmeri dijitalụ ụlọ ọrụ dijitalụ nke dabeere na Atlanta, GA. Akpọrọ Association Association nke Georgia (TAG) nke Digital Marketer nke Afọ 2015, ụzọ ọhụụ ya maka ịzụ ahịa dijitalụ agbanweela ụlọ ọrụ ahụ ma nyefee ndị ahịa nha na ahịa niile ihe dị ịrịba ama. Cardinal abiala ugboro ato aha ya na Inc. 3 ndeputa nke ulo oru US ejiri aka ike.
Scoutsee: Monetize Social Media na Mgbakwunye Storefront